नेपालका सम्पुर्ण भुमिहीन,सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाॅंउछन :- अध्यक्ष ज्ञवाली – Karnalikhabar
नेपालका सम्पुर्ण भुमिहीन,सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाॅंउछन :- अध्यक्ष ज्ञवाली
१० बर्ष अघिदेखी भोगचलन गरीरहेको जग्गा हाल जंगल वा अरुकुनै क्षेत्र तोकीयको भयपनी स्वत त्यो जमिन भोगचलन गर्ने जनताकै स्वामित्वमा जाने भनाई । जग्गाधनीले नै लालपुर्जा पाउने । कतिबर्षबाट भोगचलन भईरहोको छ त्यो ईमेज स्याटेलाईटबाट हेरीने । सो बसोबास गरीरहेको जग्गाको गलत रिपोर्टाडं गर्ने आयोग समक्ष्य गलत सुचना पुर्याउने स्थानिय निकाय वा जो कोही भयपनी कानुनी दायरामा ल्यायर तत्काल कार्वाही प्रकृयामा ल्याईने समेत उहाॅंले बताउनु भयको छ ।
खोज पत्रकार,लेखक तथा राजनितीक विष्लेशक राजन अधिकारीले भुमि संम्बन्धि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवि ज्ञवाली सॅंग भुमी सम्बन्धि तमाम समस्या र समाधानका विषयमा गर्नुभयको कुराकानीको सम्पादीत अंस ।
:- यो भुमि संम्बन्धि आयोग बन्नुको कारण र यसका उदेश्यहरु के के हुन ?
:- भूमि समस्या समाधान गर्नका लागि आयोगहरु विगतमा पनी धेरै बने पहीले बनेका आयोगहरू र यसमा फरक के छ ?
:- लगत संकलनको काम कहाँ पुग्यो ? यसमा कसरी काम हुदैछ ?
:- जहिल्यै सुकुम्वासीको नाममा हुकुम्वासीले जग्गा कब्जा गरे नाम मात्र सुकुम्बासी र गरीवको भन्ने गुनासो सुनिन्छ । यस्तो हुन नदिनका लागि आयोगले कसरी काम गर्छ ?
:- १४ लाख परिवारलाई दिन पुग्ने जग्गा कहाँ छ त ? जग्गा को खोजी कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
:- वन ऐनले वन भनिसकेपछि त्यसलाई वन नमान्न मिल्ला र ? वा ऐन ले अवरोध गर्दैन र ?
:- सुकुम्बासी समस्या सधैंका लागि समाधान गर्न सक्नुहुन्छ त ?
:- वास्तविक सुकुम्वासीको पहीचान कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
:- १४ लाख परिवारलाई विकल्प दिएर सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न कति समय लाग्ला ?
हामी प्रविधि प्रयोग गर्छौं । इमेज स्याटेलाइट भन्ने छ, त्यो प्रयोग गर्छौं । कतै ड्रोन उडाउनु पर्ने हुन्छ । जतिसुकै तीव्रताका साथ काम गरेपनि समय त लाग्छ नै । अहिले हामी समय पुग्दैन भनेर माग गर्दनौं । जति सकिन्छ हामी गर्छौं ।
अघिल्लो - जनताको नजरमा आशा, भरोसा र विस्वास पात्र, “सधै अमर रहने अमर”
No one remains hungry, no one dies of hunger: Oli - पछिल्लो